April 1, 07: Inta beri oo laga joogo markii xabashidu gashay: Kismaayo (91), Muqdisho (95), Beledweyne (98), Baydhabo (106), Galkacyo (127),
Dagaalkii Muqdisho oo Galay Maalintii Afraad
Askarigii Ugu horeeyey oo Uganda Looga Diley Muqdisho
Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo ka hadlay dagaalka Muqdisho
Dowlada maraykanka Safiirka u fadhiya Kenya oo ka hadlay dagaalka Muqdisho
April 1, 2007: Madaafiic culus ayaa kusoo dhacay bartamaha magalada Muqdisho, halkaas oo uu Axadii ka sii socdey dagaal googoos ah.
Dadweynaha ku dhaqan xaafadda garoonka kubbada cagta ee Stadium Muqdisho waxay sheegeen in barqanimadii Axadii madaafiic lagaga soo gamay dhanka Koonfureed ee magaalada..
Dadweynaha deggan xaafadda Towfiiq waxay sheegeen in madaafiic culus lagu soo garacay. Waxayna sheegeen in madaafiicda laga soo tuurayo dhanka Koonfureed ee magaalada.
Wararku waxay intaas ku darayaan in tiro shacab ah oo aad u badan ay ku dhinteen dagaalka maalintii Afraad galay ee kasocda magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada Itoobiya ay madaafiicda ku garaacayaan magaalada.
Askari Uganda looga Diley Muqdisho....
Afhayeen maanta oo Axad ah (April 1, 2007) u hadlayey ciidamada Uganda ayaa sheegay in Muqdisho looga diley askari, kaas oo ah askarigii ugu horeeyey ee ciidamada Uganda looga dilo Muqdisho, sida uu sheegay afhayeenku.
Major Felix Kulayigye oo ah Afhayeenka Ciidanka Uganda isagoo u waramayey Reuters waxa uu yiri: "Ciidankayagu waxay waardiye ka ahayeen xarunta madaxtooyada maalintii Sabtidii markaas ayaa madfac la soo tuuray waxa uu ku dhacay halkaas kuna diley mid ka mid ah askartayada."
Akhri: Ugandan troops spared in Somali fighting (Mar 30, 2007)
Prof. Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga xun tahay dagaallada ka socda maalintii afaraad Magalaada caasimadda ah ee Muqdisho.
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Baarlaamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay in dagaal wax lagu doonay ay ka wanaagsan tahay in lagu doono nabad iyo is afgarad, waxaana uu carrabka ku adkeeyay in dowladda howlgallada ay ka waddo Muqdisho ay yihiin kuo lagu sugayo ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo noqotay meel ay ku xoog badan yihiin kooxo aan la garanayn hadafkooda.
"Dowladdu waxay doonaysaa in shacabka dhexdiisa ay ka sameyso nabadgalyo iyo ammaan loo wada riyaaqo, waxayna la dagaalamaysaa kooxaha aan ujeeddada dhabta ah lahayn ee dagaallada ka wada Muqdisho" ayuu yiri Prof. Dalxa oo ku eedeeyay inay dagaallada Muqdisho ka dambeeyaan kooxo uu ugu yeeray inay yihiin kuwo aan doonayn dowladnimo iyo nabad ka dhalata Soomaaliya oo dhan, gaa ahaan Muqdisho.
"Waxaan u soo dhaarannay waa inaan danteenna ka hor-marinno midda shacabka, waana taas midda aan weli ku taagannahay, waxaana shacabka u sheegaynaa inay iska dhex qabtaan kuwa dhibaatada ka dhex wada" ayuu yiri Prof. Dalxa.
Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka ayaa wuxuu sheegay in Fidnada ay tahay mid hurudda balse ay kiciyeen kooxaha ka soo horjeeda dowladda oo caado ka dhigtay mucaaradidda dowlad kasta oo dalka loo soo dhiso, balse dowladdu waxay go'aan ku gaartay inay kuwaas la dagaasho.
Dowlada maraykanka Safiirka u fadhiya Kenya oo ka hadlay dagaallada ka socda Muqdisho iyo sida uu Mareykanku u arko
Safiirka Mareykanka ee Kenya Michael Rheinberger ayaa ka hadlay dagaallada ka socda Muqdisho isagoo ku tilmaamay in dagaalladaas ay yihiin kuwo ka sii daraya, waxaana uu sheegay in dagaallada ka socda Muqdisho la soo afjarayo dhawaan.
Rheinberger wuxuu sheegay in dagaallada ka socda Muqdsiho ay yihiin kuwo ka sii daaraya, isla markaana dhalinaya xaalado bani'aadamnimo oo aad u xun, loona baahan yahay in la soo afjaro dagaallada, shacabkana loo ogolaado inay guryahooda ku soo laabtaan.
"Dagaallada ka socda Muqdsiho waa kuwo u dhexeeya kooxo mitid ah iyo dowladda Soomaaliya, waxaana u haysanna annaga Mareykanka ahaan in dagaalkaas uu yahay mid lagu xididdo siibayo kooxo argagaxiso ah oo ku sugan Muqdisho" ayuu u sheegay Rheinberger wakaalado warar oo uu kula hadlay Nairobi.
Mar uu ka hadlayay Mowqifka Mareykanka uu ka taagan yahay dagaallada ka socda Muqdisho ayuu yiri: "Haa... waan taageersannahay in laga saaro Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho kooxo haraadiga ah ee xiriirka la leh argagaxisada caalamiga ah", wuuxuna intaas ku daray: "Dowladda Soomaaliya waxaa waajib ka saaran yahay inay dagaallada soo afjarto oo aysan noqon kuwo dabo dheeraaday".
Wuxuu dhanka kale sheegay in Beelaha Hawiye ee sheegtay in dagaallada ka socda Muqdisho ay yihiin kuwo lagu gummaado aysan sidaas u arag dagaallada balse ay ogaadaan in dagaallada uu yahay mid looga soo horjeedo kooxo xiriir la leh Argagaxisada.
Waa markii labada ee uu Mareykanku ka hadlayo dagaallada ka socda Muqdisho, isagoo uga hadlay si isku mid ah, waxaase ka hadlay UN-ka oo sheegay inay ka xun yihiin dagaallada ka socda Muqdisho deg-degna loo joojiyo.
WARARKII: March 31, 2007
Warbixintii Sabtidii: Dagaalka Muqdisho....
Dagaalkii Muqdisho ayaa Sabtidii galay maalintii saddexaad, dagaalkaas oo sii xoogeystey. Waxayna hay'adda ICRC dagaalkaas ku macnaysay "kii ugu xumaa muddo 15 sano ah."
Meydka ayaa waran waddooyinka, madaafiicda iyo hubka culus oo dhacaya ayaana suurta gal ka dhigi waayey in dhaawaca iyo meydka la qaado, ayey tiri Aljazeera. Dadka magaalada Muqdisho deggana waxay sheegeen in boqolaal qof ay dhinteen, ayaa warku intaas raaciyey.
"Ma garaneyno meel aan aadno. Waxaan ku xayirahay guryahay, meydkuna waxa uu yaalaa dariiqyada," sidaas waxaa yiri Ibraahim Ducaale oo ah weriye ka tirsan AFP oo jooga dhanka koonfureed ee magaalada xaafada Cali Kamiin. Waxana uu intaas ku daray "Ma jirto fursad lagu qaadi karo dhaawaca iyo meydka sabatoo ah hubka culul iyo lidka diyaaradaha oo dhacaya awgeed."
Xaafad gubaneysa, Muqdisho, Maarso 3, 2007. Sawirka: AFP
Salaado Yebarow, oo deggan Muqdisho, waxay hay'adda wararka ee Reuters u sheegtay "Waxaan halkan joogey 16 sano, weligayna ma arkin wax la mid ah sidan." Waxayna intaas ku dartay "Magaalada oo dhan waa la duqaynayaa si aan loo meel dayin."
Hadal uu soo saaray Wasiirka Warfaafinta Itoobiya oo laga baahiyey telefishanka Itoobiya ayaa ku andacoodey in ay dileen boqolaal hubaysan oo ka soo hor jeedey, waa sida hadalka loo dhigay 'e. Waxana hadalku intaas ku daray "Itoobiya waxay dishey 200 oo hubaysan oo ka haray Maxkamadaha Islaamiga waxaana la dhaawacay in badan."
Dhanka kale hay'adda u dooda xuquuqul Insaanka ee loo yaqaan Human Rights Watch (HRW) ayaa si kulul u eedaysay dawlahada Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo USA, waxayna ku eedaysay in ay si qarsoodi ah u xabisayaan boqolaal qof oo ka cararaya dagaalka Soomaaliya.
"Mid kasta oo dawladahaas ka mid ah waxay qayb waji gabax ah ka qaadatay in si xun loola dhaqmo dad ka cararay aagga dagaalka," sidaas waxaa yiri hogganka HRW, Georgette Gagnon.
"Dersino dad ah ayaa la dhigay xabsiyada Itoobiya" ayuu yiri Gagnon, oo intaas ku daray "waxaa lagama maarmaan ah in Itoobiya ictiraafto in ay dadkaas hayso, una ogolaato in ay arkaan beesha caalamka oo ka madax bannaan."
Qaramada Midoobey waxay sheegtay in laga soo bilaabo bishii Febraayo ee sannadkan in Muqdisho ay ka qaxeen dad lagu qiyaasay 58,000 qof.
Faadumo Cadow oo 90-jir ah, oo hoos fadhida geed ku yaal xaydaanka cisbitaal Madiina, Maarso 31, 2007. Cidbitaalka oo xamili waayey dhaawaca dadka ak soo gaaray duqayntii Muqdisho. Sawirka: Reuters.
Akhri: Civilian deaths mount in Mogadishu
Maxamed Deeq Abuukar Aruuni oo laba joodari madaxa ku sitey isagoo ka sii baxaya magaalada Muqdisho ayaa waxa uu hay'adda wararka ee AP u sheegay in uusan weligiis ka bixin Muqdisho, laakiin maanta uu ka qaxayo sababtoo ah madafiicda aan loo meel dayin oo lagu sio ridayo xaafadaha Muqdisho.
Jicamadii ayey ahayd markii diyaarad ka mid ah kuwa ka qayb qaadanaya duqaynta Muqdisho gantaal lala helay oo ay kusoo dhacday Muqdisho. Ruqiya Shaafi Muxyadiin oo deggan Muqdisho waxay tiri: Diyaaradu waxay hawada ka soo dhacday iyadoo gubaneysa, siday u sheegtay AP.
Afhayeen u hadlayey madaxweynaha DFKMG ayaa Sabtidii qiray diyaaradii Jimcadii laga soo ridey Itoobiya.
Akhri: Artillery fire, mortar shells rain down on Somalia in third day of fighting
Akhri: YAA GABLAMI, YAASE GOOD DILI?
Muqdisho: Diyaarad Helikopter ah oo Lagasoo Ridey Ciidamada Itoobiya
Diyaaradaas oo duqayneysey Magaalada Muqdisho....
Diyaarad laga soo ridey Itoobiya. Aljazeera
Maarso 30, 2007: Wararka ugu dambeeyey ee ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay in maanta (Jimce) duhurkii diyaarad helikopter laga soo ridey ciidamada Itoobiya. Waxaa wararku intaas ku dareenin diyaaradu dhacday kaddib markii lala helay gantaal ah nooca lidka diyaaradaha. Diyaaradaas oo qayb ka ahayd diyaaradihii ilaa shalay duqaynayey magaalada Muqdisho.
Dad arkayey markii diyaardu soo dheceysey ayaa sheegay in diyaaradaasi dhacday iyadoo holceysey.
Dagaalkii shalay bilowday ayaa meeshiisii ka sii socdey maanta oo Jimce ah, kaas oo sii xoogeystey. Aljazeera waxay werisey in rasaas laga maqlayey meel u dhow Villa Soomaaliya.
Akhri: Somali violence downs helicopter
Dab ka soo baxaya aagga Garoonka Diyaaraha Muqdisho, kaddib markii diyaarad helikopter ah gantaal lala helay. Maarso 30, 2007. Sawirka: AP
Shalay ayey ahayd markii Ciidamada Itoobiya laga gubey gaari nooca Uuraalka, sida ku cad warka hoose.
AKhri: Helicopter Bombing Insurgents Shot Down in Somalia
Ugu Yaraan Toddoba Ciidamada Itoobiya oo Khamiistii Lagu Diley Dagaalkii Muqdisho
Maarso 29, 2007: Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay in dagaalkii Khamiistii ka dhacay magaalada ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof oo badankoodu shacab ah, inkasta oo tirada dhabta ah ee shacabka ku dhintay ama ku dhaawacmay dagaalkaas aan la xaqiijin karin.
Waxaa wararku intaas ku dareen in dagaalkii Khamiistii ay ku dhinteen ugu yaraan 7 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya, iyadoo ay jiraan warar tirada intaas aad uga badanaya. Waxaana wararku sheegeen in gaari nooca Uuraalka loo yaqaan laga gubey ciidamada Itoobiya. Waxaana meyka askartaas la sheegay in lagu jiidey wadooyinka magaalada Muqdisho.
Dagaalkan ayaa waxaa ka qayb qaatay diyaaradaha dagaalka ee helikoptarada ee Itoobiya kuwaas oo duqeeyey Muqdisho.
Guri holcaya, Muqdisho, Sawirka: AFP, Mar 29, 2007
VOICE: Interview with Ken Menkhaus ..... VOA
The Plan -- according to U.S. General Wesley Clark (Ret.) | Youtube...
The taste of Somalia | Burlington Free Press
::: Maxaad ka Taqaan Taariikhdii Jeneraalkii Islaamka, Khaalid Bin Waliid
Ciidamada Itoobiyaaan ah oo Galay Kulliyaddii Hore ee Jaalle Siyaad..
.Warar dheeraad ah oo ka soo baxay qarixii Darmooleey..
.Saraakiil ka tirsan Uganda la kulmaya Odayaasha Beelaha
.Maxaa ka soo baxay kulankii Yuusuf iyo Qabqablayaasha..
.Wafdi ka socda Midowga Afrika oo ku soo fool Muqdisho..
.Soomaaliya iyo Itoobiyaan lagu daadiyey Xeebaha Yemen..
Wararkii oo dhan ka akhri halkan.... Mar 28